जीवनशैली — sancharkendra.com
अधिकाँश महिलाहरुलाई श्रीमानबाट किन यौन आनन्द मिल्दैन ? जानी राखौ कारण यस्तो छ
Posted by Sancharkendra | जीवनशैली
काठमाडौं । यौन मानवजीवनको अभिन्न अंग हो र स्वभाविक पनि । मानव मनमा यौनेच्छा एकदम स्वभाविक हो । भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो, मानवजीवनका लागि प्रकृतिले नै दिएको । यौनिच्छा तपाईंमा एकदमै...बाँकी
काठमाडौं । साधारणतः अरु वेलाको तुलनमा दशैंको वेला हरेकजसो घरमा मासु तथा मासुका परिकारहरु बन्ने गर्छन् । दशैंका वेलामा मासु बढि प्रयोग गर्ने पनि गरिन्छ । कुनै भोज तथा पार्टीहरुमा मासु खाने गरिएपनि दशैंमा आफ्नै...बाँकी
दशैंको उल्लासमा तपाईं के-के कुरा याद गर्नुहुन्छ ? भुल्नै नहुने जमरा, उमार्ने तरिका र फाइदासहित
Posted by Sancharkendra | जीवनशैली, मुख्य समाचार
काठमाडौं । दशैंको उल्लासमा तपाईं के के कुरा याद गर्नुहुन्छ ? नयाँ लुगा, माछामासुको स्वादिलो परिकार, सफासुग्घर घर, रातो टिका, जमरा । दशैंका अनेक विशेषता छन् । भोलि घटस्थपापना । अर्थात दशैंको सुरुवात । भोलि...बाँकी
ग्याष्ट्रिक तथा पेटका रोगीहरुले योगाभ्यास गर्दा विस्तारै गर्नुपर्छ। योगाभ्यास नियमति रुपमा गर्दै जानुपर्छ। योग स्वच्छ हावा चल्ने हरियो चौर वा खुल्ला ठाउँमा गर्नु राम्रो मानिन्छ । योगका कुनै पनि अभ्यासलाई ६ देखि १० पटकसम्म दोहोर्‍याउनु...बाँकी
सम्बन्ध बनाउन निकै सजिलो हुन्छ । तर, यसलाई जोगाइ राख्न र टिकाइ राख्न निकै कठिन हुन्छ । केही सम्बन्धहरु निकै लामो समयसम्म पनि चल्ने गर्छन् । तर, केही सम्बन्धहरु सुरुवात भएको केही दिनपछि नै टुट्ने...बाँकी
प्रत्येक मानिसको शरिरमा कही न कतै कोठी हुने गर्छ । कुनै कोठी ठुला हुन्छन् त कुनै साना । तर तिनीहरु भएको स्थानले ठुलो महत्व राख्ने गर्छ । कोठीको सम्बन्ध मानिसको धन, पारिवाकि भाग्य तथा स्वास्थसँग...बाँकी
दिनहुँ हस्तमैथुन गर्नु ठीक कि बेठिक ? के-के छन् फाइदा र बेफाइदा ? थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौं । मेरो उमेर अहिले ३५ वर्ष भयो । विवाह गरेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । मेरो सेक्स लाइफ सामान्य छ । न त पत्नीबाट म असन्तुष्ट छु न त उनी नै मबाट असन्तुष्ट भएको...बाँकी
महिनावारी हुनुअघि युवतीमा देखिन्छन् यी ८ समस्या
काठमाडौं । स्वस्थ रहनका लागि महिला वा युवती उपयुक्त समयमा महिनावारी हुन जरुरी छ। महिनावारी हुनुअघि र पछि महिलामा विभिन्न समस्याहरु देखिने गर्दछन्। महिलावारी हुनुअघि देखिने केही समस्याले महिलाले कहिले महिनावारी हुन्छु भन्ने अनुमान लगाउन...बाँकी
काठमाडौं । ‘मुला’ शब्द हामी कमसल, कमजोर वा नाथे भन्ने आशयमा प्रयोग गर्छौं । तर, यो शब्दले मुलाको अपमान गरिरहेको छ । किनभने मुला हाम्रो बोलीचालीमा प्रयोग गरिए जस्तो कमसल कुरा होइन । मुलाको स्वास्थ्य...बाँकी